Xukuumadda Madaxweyne Deni oo 100 maalmood ku guulaysatey wax aysan xukuumadihii hore mala-awaalin – Radio Daljir
Juunyo 30, 2019 11:47 b 1
Dalka Soomaaliya kama dhacdo, marnana loogama baran in hoggaanka dalku uu tixgeliyo dareenka shacabka. Dadka reer Puntland intaas ayana waa ay la qabeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxa ay Soomaali tobankii sano ee la soo dhaafay ee xukuumadihii Madaxweyne Faroole iyo tii ugu danbeysay ee Madaxweyne Gaas kaga sii dartay ayaga oo cabashada shacabka iyo tan ganacsatada dabaqadda dhexe u arkey kuwo aysan talowadaagba la aheyn. Talawadaag yari kaliya ma aha e waxaaba shacabka iyo ganacsatada qaar loo arkayey kuwo lid ku ah siyaasadda xukuumadda, oo in la iska fogeeyo ma aha e aan marnaba mudneyn in la soodhaweeyo.
Talowadaag la’aanta hoggaamadii hore ee Puntland waxa ay keentay in ganacsatada yaryar iyo kuwa dabaqadda dhexe ee Puntland lagula tartamo badeecadaha, bagaashka iyo waliba biyo aan la canshuurin oo laga soo waarido Hargeysa iyo Burco. Waxaa la gaaray heer biyaha Togdheer oo bilaa canshuur Puntland ku soo gala ay ka raqiisnaadaan biyaha Juba oo laga soo saaro Garoowe. Kaaga sii daran e, meesha biyaha Juba ee warshadda Garoowe ku dhawaad afar jeer lagu canshuuro kastamada Puntland, sida kan Bossaso, Gaalkacyo, Burtinle, Laascaanood iyo kan Baran, in kuwo Burco iyo Berbera ka yimaada celcelis ahaan la canshuuro wax ka yar hal mar.
Bishii Maarso ee 2018, wariye Radio Daljir ka socda baa waxa uu maamulka biyaha Juba weydiiyey sababta biyaha Juba oo Garoowe laga soo saaro ay uga qaalisanyihiin kuwa Togdheer ee Burco oo ka yimaada masaafo dhan ku dhawaad 400 KM? Masuulka Juba waxa uu ku jawaabey, “su’aashaas waxa ay ku fiicnaan laheyd in aad weydiisaan Wasiirka Maaliyadda Puntland?”
Subixii xigay waxa aan xafiiska Wasiirka Maaliyadda ee xilligaas ku booqaney xafiiskiisa, laakiin nooma aysan suurtoobin in aan Wasiirka la kulano, waxaa se xafiisyada kale ee Wasaaradda Maaliyadda na loo ka caddeeyey in farqigu yahay canshuur la’aan biyaha Togdheer iyo canshuur xad dhaaf ah oo ku dhacda biyaha laga soo saaro Puntland.
Haddaba maxaa sababay in maamuladii hore aysan marna dheg jalaq u siin dareenka shacabka iyo kan ganacsatada Puntland? Miyey masuuliyiintii hore ee Puntland arki waayeen oo dareemi waayeen in shacabka reer Puntland ay si dadban u bixiyaan mushaarka askarta Somaliland ee weerarka ku ah dadka iyo dhulka Puntland?
Nasiibwanaag haddii Madaxdii hore ee Puntland aysan dan ka yeelan dareenka shacabka iyo kan ganacsatada Puntland, waxaa maanta hambalyo iyo bogaadin mudan Madaxweyne Deni iyo Wasiirkiisa Maaliyadda oo gartay lagamamaarmaanimada in la difaaco danaha ganacsatada yaryar ee Puntland.
Sidaas darteed, Puntland oo intaas kore maanka ku haysa waxa ay canshuuro dheeraad ah maanta ku soo rogtay badeecadaha ka yimaada Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya, sida hoose:
1) Badeecadaha daruuriga ah (sida shidaalka gaadiidka, gaaska diyaaradaha, gaaska guryaha, baradhada, liin macaanta, saytuunka, geed miroodka, IWM) waxaa la canshuurayaa 100%
2) Badeecadaha aan daruuriga ahayn (sida biyaha, sharaabka, dharka, isbeerbaartiska, qalabka guryaha & xafiisyada, qaadka, qalabka isgaarsiinta) waxaa la canshuurayaa 200%
Xukuumadda Madaxweyne Deni oo 100 maalmood waqtigeedu kor u dhaafay waxaa maanta marnana uusan daah saarneyn in ay Puntland hormar u hayaamisay, in ay tixgalineyso dareenka shacabka, oo ay haddana u heelantahay kobcinta dhaqaalaha, mideynta shacabka, difaaca dalka, iyo waliba dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha, waa se intaas oo looga sii dhawaado, iyo wixii hore musuq darti u fashilmay oo dib loo soo toosiyo, sida Jidka Garoowe-Garacad.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17218
Xiliga la daah furi doono Dhul-daaqsimeedka degmooyinka Ufayn iyo Iskushuban oo la sahaaciyay( dhegayso)
Salebaan 5 months
Dhaqsaalaha waxba kama taqaaniin. Tan ma ahaan dhaqaale kobcin waa dhaqaale burbur.
Reer Puntland qiimaha ay alaabta ku gataan ayaa 100% ila 200% kor uu kici doona.
U Jawaab Salebaan Buri halceliska